Mayelana nathi - Guangzhou Zihang Isikhumba Co., Ltd
Guangzhou Zihang Isikhumba Products Co., Limited esungulwe ngo-2008 e Guangzhou China, njengoba umakhi uchwepheshe izikhwama ', siba nakho okucebisayo futhi team omuhle, ikakhulukazi ukuphakela izikhwama nojosaka, wallets, laptop izikhwama etc.which zenziwa ngezinto ongazikhetha ezifana bangempela lesikhumba, PU, ​​PVC, ngendwangu, inayiloni njll
Asikwazi ukuthuthukisa imikhiqizo ehlukene ukuhlangabezana ezahlukene needs.Our amakhasimende 'imboni itholakala Huadu wesifunda, Guanzhou, njengoba kungabantu abangaphezulu kuka-2000 square metres izikhala, endaweni ukukhiqizwa ihlukaniswe workshop eminingana, njengethi amasampuli workshop, ukusika workshop, ukukhiqizwa workshop, ukuhlolwa workshop futhi ukupakisha workshop.We zingabantu elidume izinga eliphakeme, ngamanani yokuncintisana, professional service yokuthengisa, iphakethe ephephile, futhi ukulethwa ngokushesha. Okuqinile ukulawula izinga wenziwa njalo inqubo, kusukela nokuhlonza izinto, ukuhlolwa, ukukhiqizwa futhi iphakethe pre-shipment.over engu-10 nakho, thina kuyashesha-ephendula isidingo amakhasimende ethu 'kanye ijwayelekile izimakethe. Nethimba lethu professional, thina esizinikezele ukubamba entsha futhi ethengiswa kakhulu kunazo izikhwama amakhasimende ethu.
Yokuthengisa team yethu njalo ilokhu eduze ukulandelela zonke oda olulodwa; ukulandela noma yikuphi imfuneko, impendulo, kanye isiphakamiso emva kokubeletha kusuka isixazululo yethu customers.Supplying kumakhasimende yethu umgomo wethu; thina ngobuqotho ukwamukela bonke nokubambisana nabangane abavela kulo lonke elase wolrd, siyajabula ukukusiza ukugcwalisa wakho fabulous fashion imibono izikhwama, futhi ekugcineni ukukulethela products.Welcome eyanelisayo uxhumane nathi manje.